Swiss Banking Benefits, Privacy, Costs and Account Setup
Swiss Banking yakagara ichibatanidzwa nevanyanzvi, vakangwara, vakachengeteka mabhengi. Icho chiziviso chekutonga kwekusarerekera kwaro uye kubatisisa kumitemo yekuvanzika kwebhangi. Vanhu vakawanda vanowanzoenda kuBuiss Bank mabhii maviri. Kutanga, vazhinji vari kutarisa kuchengetedza zvinhu zvakawanda kubva pakuongororwa kwevanhu. Chechipiri, vanhu vakawanda vanotendeukira kuSwitzerland kunobvisa mutoro wekutakura mitero yakaoma. Mapoka maviri aya akatarisa kuSwitzerland Bank consortium sechisarudzo chakanaka.
Uye izvi zvese hazvisi zvitsva. Swiss bank account yakambova mutungamiri mumabhengi emarudzi akawanda kwemakumi emakore. Izvozvi ndizvo zvisingabatanidzi rutivi rwekupokana kwezvematongerwo enyika uye kukakavadzana kwevanhu munyika yose. Ivo vave vatungamiriri mukuchengetedza kwemari uye kugadzikana kwemazana emakore emakore. Ichokwadi, nyika yakazviona izvi kubva mumazuva aLouis the XIV. Uyezve, yakaramba ichienda kumazuva akatangira kuchinja kweFrance uye kuburikidza neZviri Hondo dzeHondo. Kuchengetedza zvinhu uye mari inobva kumitero isina kukodzera kana hurumende inodzvinyirira yaiva tsvimbo yakawanda. Saizvozvowo, mucherechedzo akaisa kuSwitzerland kuti apiwe mabasa iwayo.
Icho chikonzero chekuti Swiss banking yakagadzira izvi zvinorumbidzwa offshore banking mbiri ndeiyi. Kukurudzira kwayo kwakavakirwa pachirebvu pamusoro pekuti Switzerland ine mutemo wakanyanya uye nemirairo munzvimbo. Iyo paramende inomiririra yakatarwa paramende maererano nemabhangi ayo. Uye zvakare, ivo vanofarira kuchengetedza uye kuvanzika kwemaaccounts ayo ekunze-kwakaiswa account, pazvinogoneka. Kuwedzerazve mukurumbira uyu ndechekuti mabhangi eSwiss anopa hunyanzvi zvisati zvamboitika. Uyezve, vanoratidza kuvimbika kwakazara munzvimbo inonzwisisika kwazvo yebhangi munyika.
Nhoroondo ye Swiss Banking
Nhasi Mazuva eSviss Banking zvakavanzika zvinogona kutsvaga kubva kwaSwitzerland Banking Mutemo we1934. Hurumende yavo yakagadza mutemo muzvikamu chikuru nekuda kwekutya kweGermany yeNazi uye kupesana kwezvematongerwe enyika muFrance. Masangano maviri akaedza kusundira mabhanga eSwitzerland kuti aparidze mashoko edzipo muzita re "zvakanaka zvehurumende."
VaSwitzerland vakapindura neBanning Law of 1934. Mutemo uyu wakanyatsorondedzera mitemo yekuvanzika kwebhuku. Yakapawo nheyo yepamutemo yeiyo. Pakupedzisira, yakapa mhosva dzekutonga kune avo vakaderedza kuvanzika kwe depositor accounts. Izvi zvakaguma mumamiriro ezvinhu iye zvino (zvikuru uye kuisa apa) inobata mitemo nemirairo sezvisingakwanisi. Izvi zvinoreva, nekuremekedza kuchengetedzwa kwekutumira uye zvekutengeserana, uye zvinyorwa zvepa depositors kana kuti account. Havana kurega nhoroondo dzebhangi zvishoma. Panofanira kunge kune mhosva yakakosha pamberi pehurumende, kunyanya kune imwe nyika, inogona kuvhara izvi zvakavanzika.
Kunyange kupomerwa kwekuregererwa kwemitero kwaisazova kwakakwana kudarika mitemo yekutumira yeSwiss bank. Kupomerwa chete hakusi kukanganisa kwakakomba muSwitzerland, kusingabatsiri kunze kwekutadza. Zvechokwadi hazvikwani kukanganisa mitemo yayo. Mhosva yacho inofanira kunge yakakosha kuitira kuti bhangi rekuSwitzerland ritofunge nezvekusiya mitemo yayo. Izvo zvakati, isu tinokurudzira zvikuru kuteresa kutarisana nehurumende yako yekugara uye / kana hukama hwekugara.
Nezviwero zvakawanda kana zviyero, mabhanga eSwitzerland ane chikamu chetatu chemari yose inowanikwa mukati offshore accounts. Tichifunga nezvenhamba yakawanda yeOffshore, nzvimbo dzepamusoro dzehutongi dziripo, ichi chinhu chinoshamisa. Swiss mabhangi anokwana $ 2 trillion US plus ndeyezvinyorwa zvekutaura. Nokudaro, Switzerland inenge ichiri chirevo chakanaka kana ichiuya pakupa gadziriro, yakavanzika yebhangi nzvimbo.
Numbered Swiss Bank Accounts
Izwi rinongoratidzika "nhoroondo yebhangi yakawanda" haisi chinhu kunze kwenyaya yakatarwa nenhamba. Chiverengero panzvimbo pezita redzidziri inoratidza iyo nhoroondo. Mashamba eSwitzerland akaisa mitemo pakavanzika uye nhoroondo dzavo dzakanyorwa. Kunyange zvakadaro, panofanira kunge kune munhu chaiye anonzi akabatanidzwa kune imwe nhamba yakanyorwa. Asi bhangi racho rinonyatsozivikanwa. Hazvizivikanwi kune kune vashomanana vakuru vakuru vebhangi muSwitzerland mabhangi mairi.
Nhoroondo idzi dzinonzwisisika hunoti kunyange zvakadzama-zvekuvanza. Inogona kuva yakakosha zvikuru, somuenzaniso, kune imwe kambani kana sangano rakakurumbira riri pedyo nepakati pekutsvaga kukuru. Ikoko kunogona kuva nemitengo iyo inoda kuunganidza zvinhu kunze kwekukurudzira makwikwi, vhepfenyuro, kana zvimwe zviitiko zvinogona kuvenga. Chinhu chimwe chinofanira kuva chakajeka kubva kuverenga pamusoro apa. Kunyangwe neakaverengwa yeAlex account yebhangi, bhangi haigoni kumbovimbisa zvachose kusingazivi; kunyanya munhau dzemhosva. Asi nhoroondo yeSwitzerland inowanikwa yakafanana nekambani inogona kusvika pakuzadzisa kungwara.
Swiss Banking Nhasi
Dzimwe dzimba dzakwegura dzinogona kuoma uye kufara nechinoshandura hutaneti. Panogona kunge kune magadzirirwo akavhara chinangwa chavo kana nzira. Izvi hazvisizvo zvakadaro neSwitzerland banking institution. Swiss banking yakagadziriswa nokukurumidza mukupindurwa nekufambisa kwezvigadzirwa zvemagetsi zvakagadzirirwa nenyika yanhasi. Kubva pamagetsi ekufambisa mari, kusvika kune mega-bit encryption security technologies, Swiss mabhengi ari mberi kwemazuva ano kubhengi maitiro. Kazhinji kanyaya ndiyo mazuva ekutsinzina makadhi uye suit-case mumisangano. Iko zvino inoshandurwa kubva panguva iyo yakawanda nekunyora magetsi uye internet-based "wire" kuwedzerwa kwezvinhu. mutero kutevedzera chikamu chemutambo nhasi. Mhirizhonga yemari inoshandiswa nemari inenge iri munzvimbo yekuchengetedza vakomana vakanaka uye nevarume vakaipa kunze.
Nekutanga kweAccount Account Account Mutemo Mutemo (FATCA) muU.S., mabhizimisi anoda kuendesa mari yeUnited States anofanira kupa mutero wekutsvaga kune vateereri veActor. Sangano reUnited States rakagadza mutemo musi waMarch 18, 2010 (26 USC § 6038D) uye yakawedzerwa musi waDecember 31, 2012 (26 USC §§ 1471-1474). Chinangwa chacho chakanga chiri chekusimbisa mitero yenyika yose. Chidzidzo chinobva kuTexas A & M chakagumisa kuti chiito chacho chichaita zvishoma kudarika $ 2.5 mabhiriyoni mumari pamusoro pegore re11. (Izvi zvinopesana neCongress's $ 8.7 mabhiriyoni ekufungidzirwa kwekutanga panguva imwechete.) Mushumo muForbes, zvisinei, unoratidza kuti chikwata chekusimbisa FATCA mumakore iwayo chinodhura $ 8 bhiriyoni.
Somugumisiro wemari yakakwirira yekuteerera, mabhanga akawanda eSwitzerland asarudza kusagamuchira vatengi ve US-based. Zvisinei, pane mabhanga akawanda kuSwitzerland anogamuchira US-vatengi. Nokudaro, kubvisa mari iyi, mabhangi anogamuchira vaAmerica vane zvigadziro zvemari inowanikwa kwavari inenge inenge $ 250,000 kusvika ku $ 1 Mamiriyoni US.
Nhasi, mabhangi eSwitzerland anoshandawo sezvivakwa zvekutsvaga. Vanoshandisa vamwe vevatungamiri vemari vane unyanzvi. Saka, kune zvingasarudzwa zvekutengesa mashizha, zvisungo, mutual funds nemidziyo yakakosha paIndaneti. Zvimwe, iwe unogona kuva nemudzidzisi wezvemari akadzidziswa kutarisira chikwereti chako.
Zvinofanira kuve pachena kuti Swiss mabhangi anoenderera mberi kupa nyika chaiyo, inogadziriswa mhinduro dzematambudziko mazhinji anotarisana nemurume bhizimisi kana mukadzi; kunyanya kana zvasvika pakuchengetedza mvura yavo. Kunyangwe iri kudzivirirwa kubva mumitemo isina kukodzera, kusagadzikana kwezvematongerwe enyika, kusava nechokwadi mune zvehupfumi, kana kunyange mutambo wekare wekare, Swiss banking account ingangova mhinduro yawakatsvaga.
Kuti bhonasi chitsa>